Ciwaanka madaxeed: U samee maqal-garaafyo Podcast-kaaga si aad u horumariso bulsho ahaan | Martech Zone
Talaado, Nofeembar 9, 2021 Talaado, Nofeembar 9, 2021 Douglas Karr
Warshadaha podcast-ka ayaa u sii koraya ganacsiyada. Waxaan aragnay saameynta cajiibka ah ee taxanaha podcast-ka ee aan ka caawinnay shirkadaha inay bilaabaan - qaar badan ayaa si fudud ugu guuraya boqolkiiba ugu sarreeya warshadahooda sababtoo ah la'aanta beddelka tartamaya. Podcasting waa kanaal suuqgeyneed oo cajiib ah dhowr sababood dartood:
Voice - Waxay ku siinaysaa waayo-aragnimo shucuur leh oo soo jiidasho leh halkaas oo rajadaada iyo macaamiishu ay dhisi karaan kalsooni oo ay si shakhsi ah u bartaan astaantaada.
haynta – Dhammaanteen waxaan rabnaa inaan ka caawinno macaamiisheena si ay guul u gaaraan… sidaa darteed sameynta maktabad maqal ah oo ka caawineysa inay ka faa’iideystaan ​​badeecadahaaga ama lagu baro adeegyadaada waa hab wanaagsan oo lagu dejiyo waxyaabaha laga filayo, lagu dhiso kalsoonida, laguna gaaro guul.
Markhaatiyadayada - Shirkadaha badeecadaha iyo adeegyadu waxay inta badan ka hadlaan sifooyinka iyo faa'iidooyinka, laakiin inta badan ma wadaagaan sheekooyinka macaamiishooda. Wareysiga macmiilku waa hab fiican oo lagu dhiso wacyiga iyo kalsoonida astaantaada.
Awareness - waraysiga saameeyayaasha iyo hogaamiyayaasha warshadaha ee podcast-kaaga waa hab fiican oo aad iskaga kaashan karto wax soo saarkaaga iyo adeegyadaaga oo aad xidhiidh la yeelato dadka hogaaminaya warshadahaaga.
Saadaalin – Waxaan la waraystay dhawr macmiil oo mustaqbalka ah podcast-kayga ka dibna macaamiil ahaan u saxeexay mustaqbalka. Waxay ahayd hab cajiib ah oo lagu jabiyo iibka… waana mid faa'iido u leh labada dhinac.
Taasi waxay tidhi, podcasting waxay noqon kartaa xoogaa adag. Laga soo bilaabo duubista, tafatirka, soo saarista intros/outros, martigelinta, syndicating… dhammaan kuwani waxay qaataan dadaal. Waxaan wadaagnay a maqaal dhamaystiran ee la soo dhaafay on this. Iyo… ka dib markii podcast-kaaga la daabacay, waxaad u baahan tahay inaad kor u qaaddo! Hal dariiqo oo waxtar leh oo tan lagu sameeyo ayaa ah maqal maqal ah.
Waa maxay Audiogram?
Maqal-garaameed waa muuqaal ka soo qaadaya mowjadda codka muuqaal ahaan faylka maqalka ah. dhidibka Y-ku wuxuu u taagan yahay baaxadda lagu cabiray decibels iyo dhidibka X-na wuxuu u taagan yahay inta jeer ee lagu cabiray hertz.
Warbaahinta dhijitaalka ah iyo ujeedooyinka suuqgeynta, audiogram-ku waa faylal muuqaal ah halkaas oo codkaaga lagu daro garaafyada si aad kor ugu qaadi karto podcast-kaaga kanaalka fiidiyowga sida YouTube ama ku dhex geli kanaalka bulshada sida Twitter.
Fiidiyowga bulshadu wuxuu abuuraa 1200% saamiyo ka badan qoraalka iyo sawirka la isku daray.
G2 Dad badan
Si daacadnimo ah, waxaan aad ula yaabay in kanaalada bulshada iyo fiidiyoogu aysan lahayn daabacaad podcast ah oo si toos ah loogu dhisay aaladahooda ujeedadan… Madaxa.
Horudhac: Sida Podcast-ka loogu beddelo muuqaallo la wadaagi karo
Headliner waa tafatirka macluumaadka iyo madal lagu maamulo samaynta muuqaallo la wadaagi karo ama cajalado maqal ah podcast kaaga. Qalabkooda Fiidiyowga Podcast-ka tooska ah wuxuu leeyahay qaab-muuqaal muuqaal ah oo xayeysiis ah oo xitaa waxaad u abuuri kartaa maqal-garaafyada podcast-kaaga abka moobilka Headliner.
Astaamaha madaxa ayaa ka mid ah
Waveforms - Si dhakhso leh u qabso dareenka dadka oo u sheeg inay ogaadaan maqalka podcast-ka ee ku ciyaaraya mid ka mid ah sawir-qaadayaashayada maqalka ee cajiibka ah
Fiidiyowyo aan xadidnayn - Ku xayeysiiso podcast-kaaga fiidiyowyo badan intaad rabto, oo lagu hagaajiyay kanaal kasta oo warbaahinta bulshada ah
Dhacdo Dhameystiran - Ku daabac dhammaan qaybtaada podcast-ka (ugu badnaan 2-saac) YouTube oo ka qayb gal daawadayaal cusub
Qoraalka Maqalka - Si toos ah u qor codka si loogu daro qoraallo fiidiyowyadaada si loo kordhiyo ka-qaybgalka iyo gelitaanka
Warqad Video ah - Headliner ayaa sidoo kale ka qori kara fiidiyoow! Haddii aad haysatid nuxur, waxaanu kaa caawin karnaa inaad ku darto qoraallo
Clip-ka Maqalka - Dooro cajaladaha maqalka podcast-kaaga kuwaas oo si fiican loogu hagaajiyay kanaal kasta oo bulsheed
Cabirro badan - U dhoofi fiidiyowyadaada cabbirka ugu habboon shabakad kasta oo bulsheed iyo wixii ka dambeeya
1080p Dhoofinta - Si fiican ugu eeg shaashadaha waaweyn iyo kuwa yaryar oo leh muuqaal qeexid sare oo buuxa
Qoraal Animation - Ka dooro tiro badan oo animations qoraal ah ama samee kaaga si aad ugu darto xiiso muuqaal ah oo dheeri ah fiidiyowyadaada
Dhammaan Noocyada Warbaahinta - Ku dar sawirro, fiidiyowyo fiidiyow ah, maqal dheeri ah, GIFs, iyo in ka badan mashruuc kasta
Widget-ka-xidhan - Daqiiqado gudahood, u oggolow booqdayaasha goobtaada hab ay si dhakhso leh u abuuraan fiidiyowyada Headliner
Hal Saxeex ah - Loo dhisay martigaliyayaasha shirkadaha, waxay u ogolaataa gelitaanka koontada aan kala go 'lahayn iyo isku-dubbaridka fiidiyowyada dib loogu celinayo CMS-gaaga.
Isdhexgalka - leh Acast, Castos, SoundUp, Pinecast, blubrry, Libsyn, Descript, Fireside, Podigee, Stationist, Podiant, Casted, LaunchpadOne, Futuri, Podlink, Audioboom, Rivet, Podcastpage, Entercom, iyo in ka badan.
Waa kuwan tusaale weyn oo ah Audiogram of the Headliner Podcast oo lagu martigaliyay YouTube:
Waxa ugu fiican, waxaad ku bilaabi kartaa Madaxa for free!
Isku qor Headliner
Shaacinta: Waxaan u isticmaalayaa isku xirka tixraaca Madaxa halkaas oo aan ka heli karo casriyeyn bilaash ah haddii aad saxiixdo.
Tags: 1080pcaqiido ahcod gooyeqoraalka qoraalkaaudioboommaqal maqal ahblubrrytuurtayCastossharraxaaddab dabkaFuturimadaxasida looLaunchpadOnelibsynPinecastwidget podcastPodcastbogPodiantPodigeePodlinkRivetSoundUpspareminJoogistaanimation qoraalkaqoraalka videoisbedelkawaa maxay audiogramyoutube